घात - लण्डन काठमाडौँ
कला-साहित्यOctober 4, 2021
कुर्सीले सधैं खाटलाई जिस्क्याउँथ्यो । “बोझारी !”
एक दिन खाटले मालिक र मालिक्नीको कुरा सुन्यो । मालिक – “प्यारी ! आज म गाउँ जानू पर्ने भयो । न्यास्रो नमान्नू । भोलि त जसरी पनि फर्किन्छु ।” “नगए हुन्न र ?” मालिक्नी । “जानुपर्छ । अंश बण्डाको कुरो छ ।” मालिक सम्झाउँदै थियो । मालिक्नीले मुन्टो हल्लाएर स्वीकृति दिइन् । मालिक्नीलाई अङ्गालोमा बेरेर एक चुम्बा खाँदै मालिक झोला बोकेर निस्कियो।
खाट खुसी हुँदै कुर्सीको नजिक गयो । “के हो ? आज त निकै खुसी छस् त ?” कुर्सीले सोध्यो। “सधैं मलाई बोझारी भन्थिस् नि । आज सिङ्गल । मालिक गाउँ गयो । कहिले काहीँ त हाम्रा पनि दिन फिर्दा रहेछन् । देखिस् त ।” खाटले खुसी मिश्रित गर्व पोख्यो । “लु बधाई छ !” कुर्सीलाई भित्र भित्रै रिस उठ्यो तर बाहिर देखाएन ।
साँझ पर्यो ।बिहान झिस्मिसे भयो । खाट निन्याउरो मुख लाएर सुँक सुँक गर्दै थियो । कुर्सीले लक काट्यो – “गधालाई भारी नपाएको पिरलो !” खाटलाई झन् चोट पर्यो । क्वाँ क्वाँ रुन थाल्यो । कुर्सीले सान्त्वना दिदै सोध्यो – “के भयो ? किन रोएको ?” “मेरो खुसीमा घात भयो ।” “कसरी ?” “झन् यमानको जुँगामुठे पो ल्याएर मरिछ !”
नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतले मुक्तक…
मेघनाथ चुदालीको पुस्तक “जीवनकाे कर्म”…
घडीको एउटा सुई भएर
चीनले अब स्वेदेशी कम्प्युटर मात्र प्रयोग गर्ने, ५ करोड कम्प्युटर फेर्ने
रेनु दाहालको दाबी : लोकप्रिय मतका साथ जित्छु
जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापतिसहित १५ जना माओवादीबाट निकालिए
पर्यवेक्षकको रुपमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको नाम अस्वीकृत
दलहरु निर्णायक प्रचारमा व्यस्त
शान्ति भंग गरेको आरोपमा सलमान खानजस्तै देखिने व्यक्ति लखनऊमा पक्राउ